ကျန်းမာလှပအောင် အစာအိမ်လေးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြမယ် – Trend.com.mm
များပြားလှတဲ့အစားအသောက်တွေမြည်းစမ်းစားသောက်ပြီးသွားတဲ့အခါ ဒီအစာအိမ်ထဲမှာ လိုအပ်တာတွေရော၊မလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပါပြည့်နေတတ်ပါတယ်။၀မ်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီမလိုအပ်တဲ့အဆိပ်အတောက်အညစ်အကြေးတွေကြောင့် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာဖြစ်တယ်၊အစာမကြေဖြစ်တယ်။လေထိုးလေအောင့်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါတွေက အစာအိမ်မသန့်ရှင်းလို့ပါ။ဒီတော့ ကိုယ့်အစာအိမ်လေးသန့်ရှင်းအောင်သဘာဝအတိုင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
ကိုယ်တွေနေ့စဉ်စားသုံးနေကျအစားအစာတွေနဲ့ပဲ အစာအိမ်ကိုသန့်ရှင်းလို့ရပါတယ်။အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မနက်မိုးလင်းနိုးလာလာချင်းဖြစ်စေ၊ညအိပ်ရာမ၀င်ခင်ဖြစ်စေ လုပ်ပေးကြည့်ပါ။
ပူစီနံရွက်ဟာ အစာမကြေဖြစ်တတ်တဲ့ဝေဒနာကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အစာအိမ်ကိုသန့်ရှင်းပေးပါတယ်။ပူစီနံရွက်ကိုရေနဲ့သေချာသန့်စင်ပြီး ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာလောက်စိမ်ထားပြီး မနက်ဖြစ်စေ၊ညဖြစ်စေ သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊သံပုရာရည်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ဂျင်းဖျော်ရည်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း အားလုံးကိုရောစပ်ပြီး တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ်မှသုံးကြိမ် စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ စားသောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါက အစာမကြေရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တာကိုသက်သာစေပြီး အစာအိမ်သန့်ရှင်းစေပါတယ်။
ဘာစားသောက်စရာပစ္စည်းမှမရှိရင်တောင် ရေနွေးတစ်ခွက်နဲ့ အစာအိမ်ကိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ကြက်သီးနွေးရေဟာ အစာအိမ်ကိုသန့်စင်ပေးပြီးအဆိပ်အတောက်တွေကိုဆေးကြောပေးပါတယ်။၀မ်းချုပ်တာ၊အော့အန်ချင်စိတ်ဖြစ်တာစတာတွေကို သက်သာစေသလို ရင်ပူတာကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းဖြစ်စေ၊ညမအိပ်ခင်ဖြစ်စေ ကိုယ်သောက်မယ့်ရေထဲမှာသံပုရာသီးတစ်စိတ်၊နှစ်စိတ်ညှစ်ထည့်ပြီးသောက်ပေးတာက အစာခြေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် အဆိပ်အတောက်တွေကိုပါ ကင်းစင်သွားစေပါတယ်။ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာသံပုရာရည်ညှစ်ထည့်ပြီးသောက်တာလည်း အစာအိမ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ဂျယ်လီကို မနက်စောစော ဖျော်ရည်အဖြစ်သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာလုံးအစာအိမ်ထဲမှာ နေသာထိုင်သာရှိစေပြီး အဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။၀မ်းလည်းမှန်စေလို့ ၀မ်းချုပ်တတ်တဲ့သူဆိုရင် မနက်တိုင်းပုံမှန်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အပြင်သွားတာဖြစ်စေ၊အိမ်မှာဖြစ်စေ တစ်နေ့ကို ရေဖန်ခွက် ၈ခွက်စာတော့ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ရေများများသောက်တဲ့အခါ အစာအိမ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေ၊အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်လည်းရသလို ၀မ်းလည်းမှန်၊အညစ်အကြေးလည်းသန့်စင်လို့ ဒီနည်းလမ်းက အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းလို့ပဲပြောရမှာပါပဲ။
မနက်မိုးလင်းနိုးလာပြီဆိုရင် ရေကြက်သီးနွေးရေထဲကို ဆားစားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာလောက်ထည့်ပြီး မြန်မြန်သောက်ချပါ။အစာမရှိသေးခင်သောက်ပါ။ခဏကြာတဲ့အခါ ၀မ်းသွားချင်လာပြီး အစာအိမ်ထဲက ကျန်ရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။တစ်ပတ်ကို သုံးခါလောက်လုပ်ပေးရင် ၀မ်းချုပ်တတ်တဲ့သူတွေလည်းဝမ်းမှန်လာပြီး တစ်နေကုန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သူ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သူ အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားပေးပါတယ်။အပိုအနေနဲ့လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့လည်း ကိုယ်တွေနေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့အစားအစာတွေရဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေမကျန်ရစ်အောင်၊ပိုပြီးနေထိုင်ကောင်းအောင်၊အဆီပိုတွေမရှိအောင် ဒီနည်းလေးတွေနဲ့လည်းအစာအိမ်ကို သန့်ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။နေ့တိုင်းမလုပ်နိုင်ရင်တောင် တစ်ပတ်ကိုသုံးလေးခါလောက်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျန်းမာလှပပြီးအဆီပိုကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
မြားပွားလှတဲ့အစားအသောကျတှမွေညျးစမျးစားသောကျပွီးသှားတဲ့အခါ ဒီအစာအိမျထဲမှာ လိုအပျတာတှရေော၊မလိုအပျတဲ့အညဈအကွေးတှနေဲ့ပါပွညျ့နတေတျပါတယျ။ဝမျးပုံမှနျမဟုတျတဲ့အခါမှာလညျး ဒီမလိုအပျတဲ့အဆိပျအတောကျအညဈအကွေးတှကွေောငျ့ ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာဖွဈတယျ၊အစာမကွဖွေဈတယျ။လထေိုးလအေောငျ့တှဖွေဈကွပါတယျ။ဒါတှကေ အစာအိမျမသနျ့ရှငျးလို့ပါ။ဒီတော့ ကိုယျ့အစာအိမျလေးသနျ့ရှငျးအောငျသဘာဝအတိုငျးဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ?
ကိုယျတှနေစေ့ဉျစားသုံးနကေအြစားအစာတှနေဲ့ပဲ အစာအိမျကိုသနျ့ရှငျးလို့ရပါတယျ။အခုပွောပွမယျ့ နညျးလမျးတှကေို မနကျမိုးလငျးနိုးလာလာခငျြးဖွဈစေ၊ညအိပျရာမဝငျခငျဖွဈစေ လုပျပေးကွညျ့ပါ။
ပူစီနံရှကျဟာ အစာမကွဖွေဈတတျတဲ့ဝဒေနာကိုဖယျရှားပေးပွီး အစာအိမျကိုသနျ့ရှငျးပေးပါတယျ။ပူစီနံရှကျကိုရနေဲ့သခြောသနျ့စငျပွီး ရဖေနျခှကျတဈခှကျစာလောကျစိမျထားပွီး မနကျဖွဈစေ၊ညဖွဈစေ သောကျပေးလို့ရပါတယျ။
ပြားရညျ စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျး၊သံပုရာရညျစားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျး၊ဂငျြးဖြျောရညျစားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျး အားလုံးကိုရောစပျပွီး တဈနကေို့ ၂ကွိမျမှသုံးကွိမျ စားပှဲဇှနျးတဈဇှနျးစာ စားသောကျပေးနိုငျပါတယျ။ဒါက အစာမကွရေငျပွညျ့ရငျကယျဖွဈတာကိုသကျသာစပွေီး အစာအိမျသနျ့ရှငျးစပေါတယျ။
ဘာစားသောကျစရာပစ်စညျးမှမရှိရငျတောငျ ရနှေေးတဈခှကျနဲ့ အစာအိမျကိုသနျ့ရှငျးပေးနိုငျပါသေးတယျ။ကွကျသီးနှေးရဟော အစာအိမျကိုသနျ့စငျပေးပွီးအဆိပျအတောကျတှကေိုဆေးကွောပေးပါတယျ။ဝမျးခြုပျတာ၊အော့အနျခငျြစိတျဖွဈတာစတာတှကေို သကျသာစသေလို ရငျပူတာကိုလညျးသကျသာစပေါတယျ။
မနကျမိုးလငျးဖွဈစေ၊ညမအိပျခငျဖွဈစေ ကိုယျသောကျမယျ့ရထေဲမှာသံပုရာသီးတဈစိတျ၊နှဈစိတျညှဈထညျ့ပွီးသောကျပေးတာက အစာခွစေနဈကိုကောငျးမှနျစတေဲ့အပွငျ အဆိပျအတောကျတှကေိုပါ ကငျးစငျသှားစပေါတယျ။ရနှေေးနှေးလေးထဲမှာသံပုရာရညျညှဈထညျ့ပွီးသောကျတာလညျး အစာအိမျကိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ရှားစောငျးလကျပတျအနှဈဂယျြလီကို မနကျစောစော ဖြျောရညျအဖွဈသောကျသုံးပေးမယျဆိုရငျ တဈနတေ့ာလုံးအစာအိမျထဲမှာ နသောထိုငျသာရှိစပွေီး အဆိပျအတောကျတှဖေယျရှားဖို့ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ဝမျးလညျးမှနျစလေို့ ဝမျးခြုပျတတျတဲ့သူဆိုရငျ မနကျတိုငျးပုံမှနျသောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
အပွငျသှားတာဖွဈစေ၊အိမျမှာဖွဈစေ တဈနကေို့ ရဖေနျခှကျ ၈ခှကျစာတော့ပုံမှနျသောကျပေးသငျ့ပါတယျ။ရမြေားမြားသောကျတဲ့အခါ အစာအိမျထဲက အညဈအကွေးတှေ၊အဆိပျအတောကျတှကေိုဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့ရဓောတျလညျးရသလို ဝမျးလညျးမှနျ၊အညဈအကွေးလညျးသနျ့စငျလို့ ဒီနညျးလမျးက အလှယျကူဆုံးနဲ့အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးလို့ပဲပွောရမှာပါပဲ။
မနကျမိုးလငျးနိုးလာပွီဆိုရငျ ရကွေကျသီးနှေးရထေဲကို ဆားစားပှဲတငျဇှနျး ၂ဇှနျးစာလောကျထညျ့ပွီး မွနျမွနျသောကျခပြါ။အစာမရှိသေးခငျသောကျပါ။ခဏကွာတဲ့အခါ ဝမျးသှားခငျြလာပွီး အစာအိမျထဲက ကနျြရှိနတေဲ့အညဈအကွေးတှကေိုဖယျရှားပေးပါတယျ။တဈပတျကို သုံးခါလောကျလုပျပေးရငျ ဝမျးခြုပျတတျတဲ့သူတှလေညျးဝမျးမှနျလာပွီး တဈနကေုနျနလေို့ထိုငျလို့ကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။
တကယျတော့ ခန်ဓာကိုယျဟာ သူ့လုပျငနျးစဉျနဲ့သူ အညဈအကွေးတှဖေယျရှားပေးပါတယျ။အပိုအနနေဲ့လုပျစရာမလိုဘူးဆိုပမေဲ့လညျး ကိုယျတှနေစေ့ဉျစားသောကျနတေဲ့အစားအစာတှရေဲ့ အကွှငျးအကနျြတှမေကနျြရဈအောငျ၊ပိုပွီးနထေိုငျကောငျးအောငျ၊အဆီပိုတှမေရှိအောငျ ဒီနညျးလေးတှနေဲ့လညျးအစာအိမျကို သနျ့ရှငျးပေးသငျ့ပါတယျ။နတေို့ငျးမလုပျနိုငျရငျတောငျ တဈပတျကိုသုံးလေးခါလောကျလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။အဲ့ဒါမှကနျြးမာလှပပွီးအဆီပိုကငျးတဲ့ခန်ဓာကိုယျကိုပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ။
Pitch Perfect ထဲက ဝတုတ်မလေးရဲ့ ဇာတ်ကားသစ် Isn’t It Romantic အတွက် ရင်ခုန်နေကြပြီလား